Vortex Crossover Forex Ukuhweba Isu | ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Vortex Crossover Forex Ukuhweba Isu
Ukuhweba kungaba lula. Akunasidingo sokuhweba ngokweqile. Ukuphumelela ekuhwebeni akususelwa ekubeni nesu eliyinkimbinkimbi noma isu elilula. Konke kumayelana nokuba nomphetho ngaphezu kwemakethe.
Kungani abahwebi abasafufusa kufanele bakwenze ngokweqile ukuhweba, lapho empeleni kunenzuzo encane yokusebenzisa isu eliyinkimbinkimbi? Empeleni, kungalimaza nabaqalayo ngoba imithetho eyinkimbinkimbi kakhulu ingasho nomsindo omningi. Abahwebi abangayijwayele bangaba nokuningi kakhulu abangakusingatha futhi bangazithola beqhwa uma sekuyisikhathi sokwenza isinqumo sezohwebo.
IVortex Crossover Forex Trading Strategy ingenye yezindlela zokuhweba ezilula ukulandela futhi ezingaletha ukuhweba okunenzuzo ngezithelo eziphezulu, okwenza ilungele abahwebi abaqalayo. IVortex Crossover Forex Trading Strategy isu le-crossover elilula elisebenzisa izinkomba zobuchwepheshe ezijwayelekile. Lezi zinkomba zisebenza kahle ngokubambisana ekuhlinzekeni izimpawu zokuhweba ezingabangela ukuhweba okuphezulu kwesivuno.
1 Inkomba ye-Vortex
2 Ivolumu Isisindo Sokuhamba Esilinganisiwe
4.3 Indlela ukufaka Vortex Crossover Forex Ukuhweba Isu?
I-Vortex Indicator iyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso eyenziwe ngu-Etienne Botes noDouglas Siepman. Le nkomba isiza abathengisi ukuthi babone ukuqala kwethrendi entsha noma ukuqinisekiswa kokuqondiswa kwethrendi ekhona.
Inkomba ye-Vortex isuselwa kumqondo we-vortex etholakala ekuhambeni emanzini. Umqondo wukuthi ukunyakaza kwentengo yemakethe yezimali ngandlela thile kufana nezici ezitholakala ekunyakazeni kwamanzi kwe-vortex. Njengoba i-vortex yamanzi ijikeleza futhi ihamba ngokuhamba kwamanje, Inkomba yeVortex nayo ibonisa izici ezifanayo, enemigqa emibili eshintshana ngokungafani nenye njengoba intengo ihamba.
Futhi kusekelwe ngokwengxenye kusuka kuJ. Inkomba Ye-Directional Movement ye-Welles Wilder (I-DMI). Kanjalo, i-Vortex Indicator iboniswa ngandlela thile ngokufana nenkomba ye-DMI.
Inkomba yeVortex inemigqa emibili efasiteleni layo, I-VI + ne-VI-. Le migqa emibili igudlukela ebangeni elifanayo eliwela elinye nelinye. Ukuba nomugqa we-VI + ngaphezu kwe-VI- ulayini ukhombisa ukuthi imakethe isezingeni eliphakeme, ngenkathi unomugqa we-VI + ngaphansi kwe-VI- umugqa ukhombisa ukwehla.
Ivolumu Isisindo Sokuhamba Esilinganisiwe
Ivolumu Isisindo Sokuhamba Esilinganisiwe (I-VWMA) inguqulo eguquliwe yesilinganiso esilula sokuhamba (Isikolo sebanga eliphezulu).
Isilinganiso Esijwayelekile Esivamile Sokuhamba ngokuyisisekelo simaphakathi lokuvalwa kwentengo ngezikhathi ezithile. Ngenxa yokuthi i-Simple Moving Average ibalwa kanjani, inikeza isisindo esilinganayo phakathi kwawo wonke amaphuzu wamanani, noma ngabe kuyintengo yakamuva noma eyodwa esemgqeni womsila wekhompyutha. Ngenxa yalokho, Isilinganiso Esishukumisayo Esilula sithambekela ekusaleni kakhulu futhi siphendula ngokunensa ekuguqukeni kwethrendi.
IVolumu Weighted Moving Average yathuthukiswa ukubhekana nalokhu kuswela. Iguqule ukubalwa kwayo, ukunikeza isisindo esinzima kunani lentengo yakamuva livalwa. Lokhu kwenza umugqa weVolumu Weighted Moving Average usabele kakhulu ekushintsheni kwentengo, ukuvumela abathengisi ukuthi baphendule ngokushesha kunoma isiphi isignali yokuhweba esethulwe yimakethe.
Lelisu isu isu le-crossover elilula phakathi kwe-50-period Simple Moving average (Isikolo sebanga eliphezulu) kanye nesilinganiso sezikhathi ezi-5 sevolumu enesisindo sokuhamba (I-VWMA).
Ulayini wesilinganiso sokuhamba isikhathi eside usebenzisa umugqa we- 50 I-SMA njengoba umugqa olula wokuhamba ophakathi uvamise ukungaphenduli kangako. Kanjalo, ithambekele ekuhambisaneni nomkhuba kuze kube yilapho ukuthambekela kuguqulwe ngokusobala.
Ngokwesinye isandla, umugqa wesilinganiso sokuhamba esifushane usebenzisa i 5 I-VWMA kusukela emigqeni yeVolumu enesisindo sokuhambisa isilinganiso ivame ukuphendula kakhulu. Lokhu kusinikeza izimpawu ezisheshayo noma nini lapho 5 IVWMA iwela i 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
Phezu kwalokho, isu libuye lisebenzise i-Vortex Indicator ukuqinisekisa ukuguqulwa kwesimo. Izimpawu zokuhweba zenziwa noma nini lapho kukhona ukuhlangana phakathi kwezimpawu ze-crossover ezivela emigqeni yesilinganiso sokuhamba kanye nolayini be-Vortex Indicator.
50 Isikolo sebanga eliphezulu (blue)
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 1-ihora namashadi wehora-4
Intengo kufanele yeqe ngaphezulu kwe 50 Umugqa we-SMA (blue).
Njengoba amanani eqa ngaphezu kwe- 50 Umugqa we-SMA, Amakhandlela kufanele abonakale ngomfutho oqinile we-bullish.
I- 5 Umugqa we-VWMA (green) kufanele weqe ngaphezu kwe- 50 Umugqa we-SMA.
Esikhombini se-Vortex, umugqa we-VI + (green) kufanele iwele ngenhla kwe-VI- umugqa (red).
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho intengo ivalwa ngaphansi kwe 50 Umugqa we-SMA.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa we-VI + weqa ngaphansi kwe-VI- umugqa.
Intengo kufanele yeqe ngezansi kwe 50 Umugqa we-SMA (blue).
Njengoba amanani ewela ngezansi kwe- 50 Umugqa we-SMA, Amakhandlela kufanele abonakale ngomfutho oqinile we-bearish.
I- 5 Umugqa we-VWMA (green) kufanele weqe ngezansi kwe- 50 Umugqa we-SMA.
Esikhombini se-Vortex, umugqa we-VI + (green) kufanele weqe ngezansi kwe-VI- umugqa (red).
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho intengo ivalwa ngaphezu kwe- 50 Umugqa we-SMA.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa we-VI + uwela ngaphezu kwe-VI- umugqa.
Lelisu lokuhweba lisebenza kahle ngesikhathi sokuguqulwa kwethrendi, ukuphuma okusekelwa okuphikisayo noma ulayini wokumelana, noma ukugqashuka kokuminyana.
Isihluthulelo sokuhweba leli qhinga ngempumelelo ukuthola ukuhlangana. Izimpawu ezivela ezinkomba ezithile ezenzeka eduze komunye nomunye zivame ukukhombisa umfutho oqinile. Kanjalo, ukuhweba ezindaweni ezihlanganisiwe ngokuvamile kunamathuba aphakeme okuphumelela uma kuqhathaniswa nezimpawu ezikude kakhulu.
Elinye ikhono elibalulekile ongalithuthukisa lapho uhweba ngaleli qhinga ukuphathwa kwezohwebo. Abahwebi kufanele bakwazi ukuphuma kwezohwebo ngenkathi benza inzuzo futhi baphume abathengisa ngokushesha lapho imakethe ikhombisa izimpawu zokuthi intengo ayihambisani nawe.
Vortex Crossover Forex Ukuhweba Isu inhlanganisela Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
IVortex Crossover Forex Trading Strategy inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Vortex Crossover Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula Vortex Crossover Forex Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha Vortex Crossover Forex Ukuhweba Isu
Uzobona iVortex Crossover Forex Trading Strategy iyatholakala kwi Ishadi yakho
Isiqephu esedluleUkuguquguquka Okumaphakathi Okumaphakathi kwe-AMA ngesihlungi se-MT5 Indicator
Isihloko esilandelayoMA Amakhandlela Imibala Emibili Inkomba ye-MT4
Ukuhweba Forex Nge USD / CHF